ကွေ့သယိုခေါက်ဆွဲချက်နည်း – Trend.com.mm
Posted on March 24, 2020 by adminK
အိမ်မှာအဝဆွဲနိုင်ဖို့ လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ကူ၊ ရိုးရှင်းတဲ့ ကွေ့သယိုခေါက်ဆွဲ ပြုလုပ်နည်းကို Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အရိုးပြုတ်ရည်ပဲလေဆိုပြီး ရေထဲကို အရိုးထည့်၊ ဆား၊ အရသာမှုန့်ထည့်ပြီး ပြီးလွယ်၊ စီးလွယ် မလုပ်ပဲ အောက်ပါနည်းလေးအတိုင်း တိတိကျကျလေး တစ်ခါလောက်လုပ်စားကြည့်ရင် အဖြေကိုသိရမှာပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများပေမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲရှာရတာ မလွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မဟုတ်လို့ မလုပ်စားတော့ဘူးလို့လည်း အဆုံးအဖြတ် မမြန်စေချင်ပါဘူးနော်။
ကိုက်လိုက်ရင် ဆတ်တောက်၊ ဆတ်တောက် ready made ဝက်သားလုံး၊ မြန်မာပြည်က ပုဇွန်ထုပ်အသားလေးတွေလိုပဲ မွပြီးစားလို့ကောင်းလှတဲ့ tiger prawn၊ spices အမျိုးမျိုး နဲ့ဝက်ရိုးအများကြီးကို သုံးပြီး အကြာကြီးပြုတ်ထားတာကြောင့် ချိုမွှေးလှတဲ့ အရည်၊ ချဉ်လည်းချဉ် စပ်လည်းစပ်တဲ့ ငရုတ်သီးအချဉ်၊ သင်းသင်းလေးမွှေးစေတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်၊ အရည်နဲ့တွေ့ရင် အိအိလေးစားကောင်းသွားတဲ့ ဝက်ခေါက်ကြော်တို့ကို ကန်ဇွန်းရွက်၊ ခေါက်ဆွဲတို့နဲ့ တွဲဖက်ပြီး၊ သံပုရာရည်လေးညစ်၊ ကြက်သွန်ပင်လေးဖြူးထားတဲ့ အရသာရှိလှသော ကွေ့သယိုလေး စလုပ်ကြရအောင်။
1. ဝက်ရိုး – 500 g (၃၂ ကျပ်သားခန့်)
2. ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် – ထမင်စားဇွန်း ၁ ဇွန်း
3. နာနတ်ပွင့် (star anise) – ၄ ပွင့်
4. လက်ညှိုးအရွယ်ခန့် သစ်ဂျပိုး (cinnamon stick) – ၂ ချောင်း
5. အမည်းရောင် ဖာလာစေ့ (black cardamon pod) – ၂ ခု
6. အနည်းငယ်ကြေအောင် ထောင်းထားသော ငရုတ်ကောင်းစေ့ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ
7. အခွံမခွါပဲ ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ အတက်ကြီး – ၄ တက်
8. ရေပြောင်စင်အောင်ဆေးကာ အနည်းငယ်ကြေအောင်ထုထားသော ၆ လက်မ အရှည်ခန့် နံနံပင်အမြစ်(သို့) ကြက်သွန်ပင်အမြစ် – ၂ ခု
9. ငါးငံပြာရည် – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
10. ဆား (ချင့်ချိန်ထည့်ပေးပါ။)
11. အရသာမှုန့် (ချင့်ချိန်ထည့်ပေးပါ။)
12. ကျောခွဲ အကြောထုတ် ခေါင်းဖြုတ်ထားသော tiger prawn
13. ready made ဝက်သားလုံး
14. ရှမ်းခေါက်ဆွဲဖတ် (သို့) ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲဖတ် (သို့) ဆန်ကြာဇံ
17. pickled chilli
18. ground chilli
20. နနွင်းမပါသော ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်
-ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားသောရေထဲ ပါဝင်ပစ္စည်း ၁ မှ ၁၁ အထိထည့်ကာ အိုးအဖုံး ဖုံးပြီး မီးအေးအေးဖြင့် အနည်းဆုံး ၁ နာရီခွဲခန့် ပြုတ်ထားပါ။ (ပြုတ်ချိန်ကြာရင် အရိုးထဲမှ အဆီအနှစ်များ ပိုထွက်လာတဲ့အတွက် အရသာပိုကောင်းစေပါတယ်။)
-မစားမှီ high heat သို့တိုး၍ အရမ်းဆူပွက်လာအောင် တည်ပြီးမှ ဝက်သားလုံး နှင့် ပုဇွန်ကိုထည့်ကာ ၁ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
-ခေါက်ဆွဲ နှင့် ကန်ဇွန်းရွက်ကို ဇကာထဲထည့်ပြီး ဟင်းရည်အိုးထဲ နှစ်ပြုတ်ကာ စားမည့်ပန်းကန်ထဲထည့်ပါ။ (ခေါက်ဆွဲခြောက်များကိုသုံးလျှင် ၅ နာရီခန့် ကြိုတင်ရေစိမ်ထားပါ။)
-အသားလုံး နှင့် ပုဇွန်ကိုပါ ပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပြီး ဟင်းရည်ကို (spices အဖတ်များမပါသွားအောင်) ဇကာခံပြီး လောင်းထည့်ပါ။
– နောက်ဆုံးတွင် ပါဝင်ပစ္စည်း ၁၆ မှ ၂၁ အထိထည့်ကာ အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီနော်။
အိမျမှာအဝဆှဲနိုငျဖို့ လုပျရတာ အရမျးလှယျကူ၊ ရိုးရှငျးတဲ့ ကှသေ့ယိုခေါကျဆှဲ ပွုလုပျနညျးကို Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ ဝမြှေလိုကျပါတယျ။ အရိုးပွုတျရညျပဲလဆေိုပွီး ရထေဲကို အရိုးထညျ့၊ ဆား၊ အရသာမှုနျ့ထညျ့ပွီး ပွီးလှယျ၊ စီးလှယျ မလုပျပဲ အောကျပါနညျးလေးအတိုငျး တိတိကကြလြေး တဈခါလောကျလုပျစားကွညျ့ရငျ အဖွကေိုသိရမှာပါ။ ပါဝငျပစ်စညျးမြားပမေယျ့ ခကျခကျခဲခဲရှာရတာ မလှယျတဲ့ ပစ်စညျးတှေ မဟုတျလို့ မလုပျစားတော့ဘူးလို့လညျး အဆုံးအဖွတျ မမွနျစခေငျြပါဘူးနျော။
ကိုကျလိုကျရငျ ဆတျတောကျ၊ ဆတျတောကျ ready made ဝကျသားလုံး၊ မွနျမာပွညျက ပုဇှနျထုပျအသားလေးတှလေိုပဲ မှပွီးစားလို့ကောငျးလှတဲ့ tiger prawn၊ spices အမြိုးမြိုး နဲ့ဝကျရိုးအမြားကွီးကို သုံးပွီး အကွာကွီးပွုတျထားတာကွောငျ့ ခြိုမှေးလှတဲ့ အရညျ၊ ခဉျြလညျးခဉျြ စပျလညျးစပျတဲ့ ငရုတျသီးအခဉျြ၊ သငျးသငျးလေးမှေးစတေဲ့ ကွကျသှနျဖွူ ဆီခကျြ၊ အရညျနဲ့တှရေ့ငျ အိအိလေးစားကောငျးသှားတဲ့ ဝကျခေါကျကွျောတို့ကို ကနျဇှနျးရှကျ၊ ခေါကျဆှဲတို့နဲ့ တှဲဖကျပွီး၊ သံပုရာရညျလေးညဈ၊ ကွကျသှနျပငျလေးဖွူးထားတဲ့ အရသာရှိလှသော ကှသေ့ယိုလေး စလုပျကွရအောငျ။
1. ဝကျရိုး – 500 g (၃၂ ကပျြသားခနျ့)
2. ပုဇှနျခွောကျမှုနျ့ – ထမငျစားဇှနျး ၁ ဇှနျး
3. နာနတျပှငျ့ (star anise) – ၄ ပှငျ့
4. လကျညှိုးအရှယျခနျ့ သဈဂပြိုး (cinnamon stick) – ၂ ခြောငျး
5. အမညျးရောငျ ဖာလာစေ့ (black cardamon pod) – ၂ ခု
6. အနညျးငယျကွအေောငျ ထောငျးထားသော ငရုတျကောငျးစေ့ – လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျးခှဲ
7. အခှံမခှါပဲ ဓါးပွားရိုကျထားသော ကွကျသှနျဖွူ အတကျကွီး – ၄ တကျ
8. ရပွေောငျစငျအောငျဆေးကာ အနညျးငယျကွအေောငျထုထားသော ၆ လကျမ အရှညျခနျ့ နံနံပငျအမွဈ(သို့) ကွကျသှနျပငျအမွဈ – ၂ ခု
9. ငါးငံပွာရညျ – ထမငျးစားဇှနျး ၂ ဇှနျး
10. ဆား (ခငျြ့ခြိနျထညျ့ပေးပါ။)
11. အရသာမှုနျ့ (ခငျြ့ခြိနျထညျ့ပေးပါ။)
12. ကြောခှဲ အကွောထုတျ ခေါငျးဖွုတျထားသော tiger prawn
13. ready made ဝကျသားလုံး
14. ရှမျးခေါကျဆှဲဖတျ (သို့) ရစေိမျခေါကျဆှဲဖတျ (သို့) ဆနျကွာဇံ
20. နနှငျးမပါသော ကွကျသှနျဖွူဆီခကျြ
-ပှကျပှကျဆူအောငျ တညျထားသောရထေဲ ပါဝငျပစ်စညျး ၁ မှ ၁၁ အထိထညျ့ကာ အိုးအဖုံး ဖုံးပွီး မီးအေးအေးဖွငျ့ အနညျးဆုံး ၁ နာရီခှဲခနျ့ ပွုတျထားပါ။ (ပွုတျခြိနျကွာရငျ အရိုးထဲမှ အဆီအနှဈမြား ပိုထှကျလာတဲ့အတှကျ အရသာပိုကောငျးစပေါတယျ။)
-မစားမှီ high heat သို့တိုး၍ အရမျးဆူပှကျလာအောငျ တညျပွီးမှ ဝကျသားလုံး နှငျ့ ပုဇှနျကိုထညျ့ကာ ၁ မိနဈခနျ့ထားပါ။
-ခေါကျဆှဲ နှငျ့ ကနျဇှနျးရှကျကို ဇကာထဲထညျ့ပွီး ဟငျးရညျအိုးထဲ နှဈပွုတျကာ စားမညျ့ပနျးကနျထဲထညျ့ပါ။ (ခေါကျဆှဲခွောကျမြားကိုသုံးလြှငျ ၅ နာရီခနျ့ ကွိုတငျရစေိမျထားပါ။)
-အသားလုံး နှငျ့ ပုဇှနျကိုပါ ပနျးကနျလုံးထဲထညျ့ပွီး ဟငျးရညျကို (spices အဖတျမြားမပါသှားအောငျ) ဇကာခံပွီး လောငျးထညျ့ပါ။
– နောကျဆုံးတှငျ ပါဝငျပစ်စညျး ၁၆ မှ ၂၁ အထိထညျ့ကာ အရသာရှိစှာ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီနျော။
ချစ်သူစုံတွဲတွေ အမြဲအဆင်ပြေစေမဲ့ နည်းလမ်းများ
သီချင်းအေးအေးလေးတွေနှင့်မိန်းကလေးတွေ အသည်းကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် Lee Seung Cheol (အီဆွန်းချေားလ်) ရဲ့အကြောင်းနဲ့ သူ၏တေးသီချင်းကောင်းများ